Ion Transmitter / Ion Sensor Manufacturers & Suppliers - China Ion Transmitter / Ion Sensor Factory
Imitha eku-inthanethi ye-Ion T4010
Imitha ye-Industrial online ye-Ion iyinsimbi yokuqapha nokulawula ikhwalithi yamanzi eku-inthanethi ene-microprocessor. Ingafakwa i-Ion
inzwa ekhethiwe yeFluoride, i-Chloride, i-Ca2 +, i-K +, i-NO3-, i-NO2-, i-NH4 +, njll.
Imitha ye-Industrial online ye-Ion iyinsimbi yokuqapha nokulawula ikhwalithi yamanzi eku-inthanethi ene-microprocessor. Ingafakelwa inzwa ekhethiwe ye-Ion yeFluoride, iChloride, i-Ca2 +, K +,
NO3-, NO2-, NH4 +, njll.
Imitha eku-inthanethi ye-Ion T6510
CS6514 Ammonium ion Inzwa
Ion electrode ekhethiwe uhlobo lwenzwa ye-electrochemical esebenzisa ulwelwesi amandla ukukala umsebenzi noma ukuhlushwa kwama-ion kusixazululo. Lapho ihlangana nesixazululo esiqukethe ama-ion okufanele alinganiswe, izokhiqiza ukuxhumana nenzwa kusixhumi esibonakalayo phakathi kolwelwesi lwayo olubucayi nesisombululo. Umsebenzi we-Ion uhlobene ngqo namandla we-membrane. Ama-electrode akhethiwe abizwa nangokuthi i-membrane electrode. Lolu hlobo lwe-electrode lunolwelwesi olukhethekile lwe-electrode olukhetha ngokukhetha ama-ion athile. Ubudlelwano phakathi kwamandla we-membrane ye-electrode nokuqukethwe kwe-ion okuzolinganiswa kuvumelana nefomula yeNernst. Lolu hlobo lwe-electrode lunezici zokukhetha okuhle nesikhathi esifushane sokulinganisa, okwenza kube i-electrode yesikhombi esetshenziswa kakhulu ekuhlaziyweni okungaba khona.
CS6714 Ammonium Ion Inzwa
CS6518 Calcium ion Inzwa
I-calcium electrode iyi-PVC ebukhali i-membrane calcium ion electrode ekhethiwe enosawoti we-organic phosphorus njengento esebenzayo, esetshenziselwa ukukala ukugxila kwe-Ca2 + ions kusixazululo.
CS6718 Ukuqina Inzwa (Calcium)
Ukusetshenziswa kwe-calcium ion: Indlela ye-calcium ion ekhethiwe ye-electrode iyindlela ephumelelayo yokuthola okuqukethwe kwe-calcium ion kusampula. I-calcium ion electrode ekhethiwe nayo isetshenziswa kaningi kumathuluzi aku-inthanethi, njengokuqapha kokuqukethwe kwe-calcium ion kwezimboni, i-calcium ion electrode ekhethiwe inezici zesilinganiso esilula, impendulo esheshayo nenembile, futhi ingasetshenziswa nge-pH ne-ion metres ne-calcium online abahlaziyi be-ion. Ibuye isetshenziswe kuma-detectors we-ion electrode akhethiwe we-electrolyte analyzers kanye nabahlaziyi be-injection injection.
CS6511 Chloride Ion Inzwa
Inzwa ekwi-inthanethi ye-chloride ion isebenzisa i-membrane eqinile i-electrode ekhethiwe yokuhlola ion chloride ions entanta emanzini, esheshayo, elula, enembile futhi eyongayo.
CS6711 Chloride Ion Inzwa
CS6510 Fluoride Ion Inzwa
I-electrode ekhethiwe ye-fluoride i-electrode ekhethiwe ezwela ekugxileni kwe-fluoride ion, okuvame kakhulu yi-lanthanum fluoride electrode.
I-Lanthanum fluoride electrode inzwa eyenziwe nge-lanthanum fluoride crystal eyodwa eyenziwe nge-europium fluoride enezimbobo ze-lattice njengezinto eziyinhloko. Le filimu eyi-crystal inezici zokufuduka kwe-fluoride ion emigodini yama-lattice.
Ngakho-ke, ine-conductivity enhle kakhulu ye-ion. Usebenzisa le ulwelwesi lwe-crystal, i-fluoride ion electrode ingenziwa ngokuhlukanisa izixazululo ezimbili ze-fluoride ion. Inzwa ye-fluoride ion ine-coefficient yokukhetha engu-1.
Futhi cishe akukho ukukhetha kwamanye ama-ion kusixazululo. I-ion kuphela enokuphazanyiswa okunamandla yi-OH-, ezosabela nge-lanthanum fluoride futhi ithinte ukuzimisela kwama-fluoride ion. Noma kunjalo, kungalungiswa ukunquma isampula pH <7 ukugwema lokhu kuphazamiseka.
I-electrode ye-CS6520 yeNitrate
Onke ama-electrode wethu we-Ion Selective (ISE) ayatholakala ngezindlela nobude obuningi ukuze alingane nezinhlobonhlobo zezicelo.
Lawa ma-Electrode e-Ion Selective aklanyelwe ukusebenza nganoma iyiphi imitha yesimanje ye-pH / mV, imitha ye-ISE / yokuhlushwa, noma insimbi efanelekile eku-inthanethi.
Inzwa yokuqhuba ye-TDS, Inzwa Yokusebenza Kwenethiwekhi yeTitanium, Ph Inzwa electrode, Isizweli sokusebenza se-Quadrupole Graphite, Inzwa Yokusebenza Kwe-Electromagnetic, Inzwa yeChlorophyll,